Ogaden News Agency (ONA) – Xaaskii Kaligii Taliye Meles Zenaw oo Wadanka Kabaxsatay.
Xaaskii Kaligii Taliye Meles Zenaw oo Wadanka Kabaxsatay.
Posted by Dulmane	/ May 28, 2016
War aan xaqiiqadiisa kudaba jiro ayaa sheegaya in xaaskii Kaligii Taliyihii Bakhtiyay, Malies Zenawi kabaxsatay wadanka Itoobiya.
Azeb Masfin oo Mar ahayd shakhsiga wadanka Itoobiya ugu awooda badan marka laga reebo saygeeda ayaa lagu soowaramayaa in ay ka huleeshay guud ahaan dhulkii ay ku amarkutaag layn jirtay ee Itoobiya kadib bakhtigii KT Meles Zenawi oo ahaa ninka Azeb Masfin.
Sida warku sheegayo Azeb Masfin iyo ciyaalkeeda ayaa lagu arkay Gobolka Dalas ee cariga Maraykanka, warkan oo aan kahelay ilo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in ay Azeb Horaan guryo uga dhisatay gobolkaas waxaana lasheegayaa hanti umadeed oo badan in ay kutagri fashay kuna dhisatay guryo qaali ah.
Haweenaydan ayaa ahayd shakhsiga kaliya ee loo ogolaaday in ay wadanka keento shirkado qandaraasyada qaata oo bilaa canshuur howshooda kuqabsada waxayna shirkadahaas kasamaysay hanti aad ubadan oo shacabku lahaa.